कांग्रेसको भविष्य Kasthamandap Daily
अन्ततः प्रधानमन्त्री पदबाट शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । आलोचनाका बावजुद संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्न सत्ता लम्बाउनुपरेको जवाफ देउवाले सरकारबाट बहिर्गमन हुँदै गर्दा आफनो सम्बोधनका क्रममा दिए । देउवाको चौंथो प्रधानमन्त्रीकालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपुर्ण निर्वाचन सम्पन्न भए । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आफ्नो मुख्य उपलब्धी भएको दाबी देउवाले फागुन ३ गते राष्ट्रवासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा गरे । उनले दोस्रो चरणको स्थानिय निर्वाचन पनि आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गराएका थिए । आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पराजय भोगेतापनि तीन तहको सफल निर्वाचन गराएर उनले संघियताको कार्यान्वयनतर्फ देशलाई अगाडी बढाए । यो निश्चयपनि देशका लागि ठुलो उपलब्धी हो । संविधानमा असनेष राख्दै आन्दोलनमा रहेका मधेशवादी दलहरुलाई समेत निर्वाचनमा सहभागि हुने अवस्था सिर्जना गर्नुको श्रेय देउवालाई जान्छ नै ।
पार्टी सभापतीको हैसियतले निर्वाचनमा पराजयको अपजस बढी देउवामाथी नै जान्छ । तर,पराजयमा एउटा मात्र व्यक्तिको दोष नभई पार्टीको संरचनागत त्रुटी नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । नेपाली काँग्रेस लामो समयदेखि गुट र उपगुटको सिकार हुँदै आएको छ । यस पटकका निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि रणनीति तयार गर्दा सम्म यि गुट र उपगुटहरु सक्रिय भए । यसर्थ यसको जिम्मेवारी पनि रामचन्द्र पौडेल, सशांक कोइराला र कृष्ण सीटौला जस्ता सबै नेताहरुको भागमा पनि पर्छ । आरोपप्रत्यारोपबाट मुक्त हुँदै कांग्रेसले आफनो पुर्नजीवनकालागि समग्र पार्टीमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । निर्वाचन पराजयको समीक्षा र भावी रणनीति तय गर्न निकट भविष्यमा महासमिति बैठक पक्कै आव्हान गरिएला । सो बैठकसँगै पार्टी सभापती देउवाको सामु चुनौतिहरु थप हुनेछन । देशमा कम्युनिष्ट भनिने पार्टीहरु स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म शक्तिशाली हुँदै आउँदा अब कांग्रेसको भविष्य के होला ? प्रश्न चारैतिर छ । बेलैमा सच्चीएर संगठनलाई चुस्त दुरुसत गर्दै जनताकोबिचमा जान सके कांग्रेसमा सुधारको गुन्जायस पक्कै छ । तर, कांग्रेसले निर्वाचन पराजयका कारणहरुका बारेमा पहिला कठोर समिक्षा गर्दै त्यसको निराकरण गर्नु पर्दछ । यि आलोचनाकाबिच सभापति शेरबहादुर देउवा कसरी अगाडी बढछन ? अहिले देशैभरका कांग्रेसजनले हेरिरहेका छन् । गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइरालाहरुको निधन पश्चात कांग्रेसमा नेतृत्वको संकट देखा परेको हो । छोटो कालखण्डमा शुसील कोइरालाले नेतृत्व गरेपनि उनको निधन पश्चान १३औं महाधिवेशनमा देउवा सभापति बने । तर महाधिवेशनले पार्टी जीवनमा सुधार हुने जुन अपेक्षा , विविधकारणहरुले त्यो हुन सकेन । किनकि हामी देउवाबाट मात्र त्रेय नेता जस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सक्दैनौ । ०४७ सालमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सत्ता सम्हालेदेखि पार्टी आन्तरिक कलहमा डुबेको हो । यसका लागि नेता त्रयनै जिम्मेवार छन् । त्यहि बेलादेखिको गुट उपगुट र अन्तर्घातको सँस्कृतिले यसपालीको निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई गाँज्यो । यहि हो संरचनात्मक त्रुटी । त्यहि बेलादेखि नेता त्रय पश्चात पार्टीको भावि नेतृत्वमा देउवा, रामचन्द्र पौडेल र शैलजा आचार्यको नाम आएको हो । शैलजा आचार्यको निधन भयो भने रामचन्द्र पौडेल अझै पनि पार्टीको एक गुटको नेता छन् । यि तिनजनाको नाममा शेर बहादुर देउवामात्र अहिले सम्म नेतृत्व पंक्तिमा पुगे । तत्कालीन नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विकल्प खोज्नेहरुले देउवालाई आफ्नो नेता माने कोइरालासँग व्यापक असहमती भएपछि देउवाले केहि काल नेपाली काग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को नेतृत्व गरे । राजा ज्ञानेन्द्रको अलोकप्रिय निरंकुश शासनको पतन पछि देउवा मूल पार्टीमा फर्के । विद्यार्थी जीवनदेखि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक आन्दोलनमा होमीएका देउवा विभिन्न चरणमा गरेर चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने । १३औ महाधिवेशनले सभापतिको जिम्मेवारी दिएपछि यस निर्वाचनको परिणामपछि देउवाको नेतृत्व आलोचित बनेको छ । यहि आलोचनाहरुका बिच उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्नुपरेको छ । देउवाले लिने निर्णयमै कांग्रेसको भविष्य पनि निर्भर छ । उनको कटु आलोचक मध्ये शेखर कोइरालाले पनि आफुलाई नेतृत्वको दाविकर्ताको रुपमा पेश गरेका छन् । युवा नेतृत्वलाई पार्टीको कमाण्ड सुम्पिनुपर्ने आवाजपनि उठेको छ । देउवाले प्रभावशाली युवा नेता विश्व प्रकाश शर्मालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा युवाहरुको भुमिकालाई स्वीकारेको सन्देश दिएका छन् ।
पार्टी उमेरभन्दा पनि विचारले चल्ने हो । विचार युवा हुने हो भने उमेरले खास फरक पर्दैन । विचारको युवापनकै कारणले भारतका नरेन्द्र मोदीले आफुभन्दा कान्छा राहुल गान्धीलाई लोकसभाको गत चुनावमा पराजयमा पु¥याए । आधुनिक चीनका जन्मदाता देङ स्याओ पिङले विचारको युवापनका कारणबृद्ध अवस्थामा पनि राष्ट्रको पुननिर्माण गरे । यसर्थ नेपाली कांग्रेसलाई पुनः जिवन दिनकालागि देउवाले आफुलाई समयानुकुल पार्दै युवाहरुको आवाजलाई ध्यान दिँदै अघि बढनुपर्छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको करिब ३ दशक वितिसक्न लाग्दा कांग्रेस नीति मुखी होइन नेतामुखी मात्र रहनु विडम्बना हो । सभापति देउवाले पार्टीको संरचनात्मक परिवर्तन गरि नीतिमुखी पार्टी बनाउनुपर्छ । हुनत, देउवाकै कार्यकालमा दलित, जनजाती र महिलाहरुलाई समावेशी बनाउने काम भयो । तर, निर्वाचनमा पार्टीले यस्को जस लिन सकेन । एकथरी आलोचकहरुले काग्रेस राष्ट्रियताको मामीलामा कमजोर भएको आरोप लगाए । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सफलता हेर्दा राष्ट्रियताको मुद्धा पनि पार्टी कमजोर भएको देखियो । तर, देउवाले राष्ट्रवासीहरुको नामा सम्बोधन गर्दा कुनै एक भेगका जनताले अधिकारको कुरागर्दा राष्ट्रविरोधी देख्ने अवसरवादको अन्त्य चाहेको बताएका छन् । कांग्रेसमा राष्ट्रियताको विषयमा सबैभन्दा चिन्तित वी.पी. कोइराला थिए । यसर्थ कांग्रेसले राष्ट्रवादको विषयमा आलोचना गर्ने मात्र होइन, आफूपनि अब्बल देखिनु पर्छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा बोकेको कांग्रेसको इतिहास आज सबैभन्दा जटिल मोडमा छ । यसर्थ यस जटील मोडबाट पार्टीलाई जति सक्दो पार गराउन सके देउवाको सभापतित्वकाल सार्थक देखिन सक्छ । कांग्रेसपार्टी साम्यवादीहरु जसतो महाभाष्य बोकेको “यूटोपीयन” पार्टी होइन । यसर्थ राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय परिवेशका जीउँदा जाग्दा यथार्थका बिच नेपाली जनताको आसा र भरोसाको केन्द्र विन्दुमा रहन सक्नुमा नै सबैको भविष्य छ । नत्रभने कांग्रेस इतिहासको मात्र विषय नरहला भनेर भन्न सकिन्न । यसको निर्णय कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ , त्यसमापनि भर पर्दछ । जस्ले जे भनेपनि २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कंग्रेसको नराम्रो पराजय हुन अनुमान हुँदा पनि देश, जनता र लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर गिरजा प्रसाद कोइरालाले निर्वाचन गराएका थिए अहिले देउवाले पनि केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गराएर १० वर्ष देखीको संक्रमणकालको अन्त्य गरेका छन् । यो नै उनको सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
पार्टीमा अनुशासन समिति विधानमा छ,व्यवहारमा छैन । यस्तो अवस्था रहेसम्म संगठन सुदृढिकरण हुनसक्दैन । महाधिवेशनको मुखमा क्रियाशिल शुल्क एकमुष्ट बुझाउने चलन छ । त्यसलाई मासिक तिर्ने व्यवस्थ ागर्ने हो भने कार्यकर्ता र नेतृत्वको बिचमा निरन्तर सम्पर्क स्थापित हुने छ । भ्रातृसंस्था वडातहदेखि गाउँ,नगर,जिल्ला हुँदे केन्द्रले हारको जिम्मा लिँदै आफैबाट सुधारको संकल्प गर्नुपर्छ । छायाँ सरकारका रुपमा काम गर्दै जनताको मन जित्न कांग्रेसले मेहनत गर्नुृपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा ४ वर्षमा १५ देखि बीस लाख नयाँ मत थप्न असमभव छैन । सबैले इमान्दार प्रयत्न गर्ने हो भने कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ।
(लेखक जनसम्पर्क समिति युरोपका उपाध्यक्ष हुन)